Ginea-Bisao: Andro Iraisam-pirenena Ho an’ny Ankizy Afrikana · Global Voices teny Malagasy
Ginea-Bisao: Andro Iraisam-pirenena Ho an'ny Ankizy Afrikana
Voadika ny 03 Jolay 2011 11:23 GMT
Ny Andron'ny Ankizy Afrikana, izay tontosaina isaky ny 16 Jona, dia mikatsaka ny hahatsiarovana ny zo tsy azo iadiam-barotry ny ankizy. Efa nankalazaina hatramin'ny 1991 io Andro io, rehefa nanao izany ho fahatsiarovana ireo ankizilahy sy ankizivavy maty tamin'ny Fikomiana tao Soweto tatsy Afrika Atsimo tamin'ny 1976 noho ny fanoherana ny fanavakavahana amin'ny fanabeazana ny Fiombonambe Afrikana (O.U.A). Izany daty izany dia lasa toerana iray fieritreretana ny amin'ny fanatsarana ny fahazazana, ny fampianarana ho an'ny rehetra tsy misy fanavakavahana ara-pananahana, ara-pinoana, na volon-koditra. Mifantoka amin'ny fisorohana ny voina mety hisy fiatraikany amin'ny vondrom-piarahamonina ihany koa, tahaka ny aretina sy ny fahantrana, ary koa hetsika fanohanana sy fanamafisana ho an'ny tanora Afrikana.
Eo ambanin'ny lohahevitra ho an'ny taona 2011 “Mivondrona amin'ny Fanaovana Asa Maika ho an'ireo Ankizy Eny An-dalambe,” ny tanjona dia ny fanintonana ny saina amin'ny loza hatrehan'ireo ankizy eny an-dalambe, matetika iharan'ny herisetra, fanolanana, sy fanararaotana . Tsapa kokoa ity fankalazana ity tany Guinea Bissau, firenena Afrikana Tandrefana, iray amin'ireo firenena mahantra indrindra eran-tany, izay ny 40%n'ny mponina dia latsaky ny 15 taona ary matetika dia tafiditra amin'ny varotra olona sy fampiasana zaza tsy ampy taona.
Fankalazana ny Andron'ny Ankizy Afrikana tany amin'ny manodidina an'i Bandim any Bissau.
Ny tetikasa tohanan'ny Rising Voices, Youth Voices of Bandim sy Enterramento (Ny Feon'ny Tanora any Bandim sy Enterramento) dia namoaka lahatsoratra anaty bilaogy momba ny fankalazana io Andro io tany amin'ireo toerana lavitra an'i Enterramento [pt] sy Bandim [pt], tany amin'ny renivohitr'i Bissau. Nokarakarain'ny Fikambanam-pirenena Naman'ny Ankizy (Associação dos Amigos de Criança, AMIC) izany fankalazana izany, izay manome tohana ho an'ireo ankizy marefo avy ao, na mandalo ao Bissau ho fampiraisana indray ny fianakaviana sy fananganana fanaraha-maso momba ny zon'ny ankizy mba hisorohana ny tranganà varotra olona. Nifarana tamin'ny “fihetsiketsehana ara-mozika goavana, dihy nentin-drazana sy tantara an-tsehatra nataon'ireo tarika Netos de Bandim sy Enterramento Unido” io Andro io ary hita tao anatiny ihany koa ny :
ny lalao baolina kitra niarahan'ireo ankizy manodidina an'i Bandim sy Enterramento, fandefasana horonantsary, vaky boky, adihevitra, mozika, tantara an-tsehatra, dihy nentin-drazana momba ny varo-jaza. Ireo tanora mpikarakara avy ao amin'ny AMIC dia nampiasa io fotoana io mba hampitandremana ireo ankizy nanatrika ny fankalazana ny amin'ny loza ateraky ny varo-jaza ary nanome azy ireo fahafaha-mamantatra ireo tranga misy loza mitatao.
Ary koa, nampiasaina ilay hetsika mba hampahafantarana ny boky “Voices of Us” (Ny Feontsika), ny tantara an-tsary “Street Children” (Ankizy an-dalambe) novokarina avy amin'ny tetikasan'ireo Ankizin'ny lalàmbe novatsian'ny ACEP. Notolorana ny “Tari-dàlan'ny Zon'ny Ankizy” sy ny fanadihadiana tranga “Engenho de Rua” ihany koa ireo ankizy sy tanora avy any Barrios Bandim sy Enterramento.